Vaovao - Inona avy ireo tombony azo amin'ny fefy vy?
Tombony amin'ny fefy vy: tanjaka sy hamafisana.
Amin'izao fotoana izao, matetika ny olona dia mahita ny karazana vokatra vy amin'ny fiainany. Mino aho fa tokony ho fantatry ny ankamaroan'ny olona fa rehefa mampiasa vy toy izany ianao dia ho hitanao fa tena avo dia avo ny hamafiny sy ny tanjany. Na tantanana izy na vaky ny tanany dia tsy afaka manova ny endriny izy io. Na dia afaka manova ny endriny aza izy io dia tsy misy dikany ary sarotra ny mahita azy raha mitanjaka, Ny tanjaka sy ny hamafin'ity karazana metaly ity dia somary avo, noho izany dia somary avo ny tanjaka sy ny hamafin'ity karazana metaly ity. Na dia azo ovaina aza ny endriny dia tsy afaka miaro tena tsara kokoa amin'ny fizotran'ny fampiasana izany.
Fametrahana mora sy plastika mahery. Amin'izao fotoana izao, ny fefy ampiasaina amin'ny ankapobeny dia vita manokana, miaraka amina fomba vaovao, izay mahatonga ny olona maro te-hividy. Aorian'izany, ny fametrahana dia tsotra ary mety amin'ny fampiasana faritra midadasika. Amin'ny alàlan'ireo toetra ireo dia mino aho fa afaka misafidy karazana fefy vy ity ny olona rehefa misafidy mpiambina. Tsy vao izao no volavola, fa mora ihany koa.
Ny fefy vy dia manana tombony roa: tsy manam-paharoa.
Raha ny marina dia maro ny olona no mifidy an'ity karazana fanaka vy ity rehefa mividy fanaka isan-karazany. Na dia mihevitra aza ny olona sasany fa ambany dia ambany ny fanaka vy, amin'izao fotoana izao, rehefa atambatra ny fanaka isan-karazany dia afaka mahazo fomba manokana kokoa izy ireo. Io fomba io dia mitovy amin'ny fomba pasteur amerikana. Noho izany, rehefa manaingo ny fianakaviana, ity karazana fanaka vy ity no hany safidy ho an'ny olona maro. Izany dia noho ny fomba pasteur amerikanina ihany koa. Rehefa manaingo ny fianakaviana dia ity karazana fanaka vy ity ihany no safidy ho an'ny olona maro. Izany koa dia noho io antony io. Betsaka ny olona no hisafidy an'ity fitaovana ity rehefa handravaka an'i Etazonia.
Ny fefy vy dia manana tombony telo: ny vidiny mirary.
Angamba olona maro no tsy mahalala firy ny vidiny sy ny fironana amin'ny tsena ara-bola, fa ireo izay mijery ahy kely fotsiny dia hahafantatra fa ny vidin'ny vy no mora indrindra amin'ny karazan-karena ara-bola rehetra, satria ny loharanon-karena vy ho mora indrindra, satria manan-karena ihany koa ny harena vy, ary misy dingana maro hamokarana karazana vokatra vy, ny vidin'ny vokatra vy dia tsy azo alamina tsara.